Blog, for blogs laga helo IPad - Geofumadas
Abriil, 2011 Apple - Mac, Internet iyo Blogs, safarka
Waxay u muuqataa inaan ugu dambeyntii helnay codsi la aqbali karo oo loogu talagalay IPad taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku qorto barta internetka iyada oo aan wax dhibaato ah qabin. Illaa iyo hadda ayaan isku dayey BlogPress iyo sarkaalka WordPress, laakiin waxaan u maleynayaa in Blogsy uu yahay midka la doortay marka la eego daabacaadda WYSIWYG ama in yar oo saaxiibtinimo ah.
Inkasta oo aan ku qasbanahay inaan xalliyo adeegga sawirada lagu soo bandhigay isla goobta sababtoo ah waxay ujeedadiisu tahay mid dhexdhexaad ah oo la xiriirta waxa ku yaala Flickr ama Picasa, sidoo kale waxaan helaa xalka si aanan ugu adkeynin inaan ku daro boosaska u dhexeeya cutubyada.
Laakiin ugu dambeyntii waxaan dhihi karaa:
Ku faraxsanahay IPadkayga
Inkasta oo kalluumeysiga mangrove ee La Puntilla, waxaan dhamaystiri doonaa maqaalka si kalsooni loo helo. Blogsy wuxuu leeyahay laba nooc oo soo dajin ah: mid la yiraahdo Rich Rich, kaas oo ah halka laga arki karo waxyaabaha horudhaca ah, halkan sawirada waa la jiidan yahay oo ku yaal; dhinaca kale waa html, halkan waa qoraal.
Si aad uga guurto qaabka hodanka ku ah HTML waxaad ku qasban tahay inaad fartaada siisid horjooge, laakiin waan ku adkaaday inaan helo caawinaad la'aan. Ugu dambeyntii waan ogaa shaksi ahaan.
Jadwalkan waxaad ku arki kartaa waxa suurtagal ah in la sameeyo. Aad u fiican, ka fiican waxa la sameeyo LiveWriter, iyo sawirka soo socda wuxuu soo koobayaa sifooyinka ugu muhiimsan. Shaxda waxay sidoo kale sharaxeysaa waxa loo sameeyey dhinacyo kala duwan.
Si aad u diiwaangeliso blog-ga, ama u dejiso batoonka "dejinta" ee midigta hoose ee shaashadda.
Waxaad ka arki kartaa boostada "gobolada" daabacan "," qabyo qoraalka "iyo sida ugu fiican oo dhan, waxay ku taageertaa nooca maxalliga ah wixii aad ka shaqeyn karto ka hor intaanad si hufan ugu soo gudbin.
Waxaad kala dooran kartaa xisaabaadka Flickr, Picasa, Google iyo YouTube. Tani way fiican tahay, sababtoo ah ku dhowaad guji waxaad ka heli kartaa faylashaada.
Si aad u hesho sawirro, kaliya xulo guddiga la yiraahdo "Dock", taabashada sawirada la xulay fartaada kuna jiid jaantuska qoraalka habka hodanka ah. Waxaa jira fursado deg-deg ah oo lagu heli karo bartamaha, ama ku habboon dhinaca bidixda iyo midigta.
Sawirka ayaa la sii daayaa, diyaarna u ah. Inkasta oo khaladaadka hadda jira ee codsigu aanu ogolaanin in meel kale loo raro jiiditaanka sababtoo ah waa la lumay.
Kadib waxaad la xiriiri kartaa oo wax ka bedeli kartaa xaaladahan sida isku dhejinta, xidhiidhka, qoraalka hoose ama tirtir. Waxa kale oo aad bedeli kartaa xajmiga inkastoo ayan waxba ka qaban karin sababtoo ah ma ku dari kartid cabbir leh lambarka buugga sida 450, badanaa farahaaga wax yar ayay ku kacayaan.
Si aad u hesho sawirrada shabakadda, kaliya qor cinwaanka bogga naga xiiseynaya, ka dibna fartaada ku rid muuqaalkeena. Dhamaan sawirada ma jiidi karaan, maaddaama qaar ka mid ah boggaa ay ku muujiyaan qoraalka, laakiin guud ahaan, sawirrada lagu soo bandhigay <img> tag waxay muujinaysaa Fomo mascot.
Waxay gurguuraan oo tagaan, waana taas. Raaxo u yeelo ikhtiyaarka in dhamaan sawirada ay ku xiran yihiin isku xirnaan, taas oo ay tahay in loo qaabeyn karo meel codsi ah si loo tirtiro sidii hore. Sidoo kale guud ahaan xajmiga sawirka guud (asalka, 450, 300, iwm)
Ku dar fiidiyowyada boostada
Tani, xulashada Youtube ee tabka loo yaqaan 'Dock' ayaa la doortaa. Kadibna, qofka la doortay ayaa loo jiiday boostada. Marka la eego farta labaad waxay u oggolaan kartaa bedelida xajmiga, ka dibna waa la sii daayaa.
Si aad u bedesho guryaha, taabashada iyo badalida fursadaha sida cabbirka, xuduudaha, midabka, filimada la xidhiidha ama tirtir. Waxaad sidoo kale u habeyn kartaa fursadaha iframe, sida fiidiyowyadii hore loo geeyay halkii laga soo gali lahaa.
Haddii ay dhacdo in la geliyo fiidiyowga muuqaalka ah, waxaa lagu xushay barta shabakada, waa la nuqulo kadibna ku dhajiyay meesha doorbiday inta lagu jiro nooca "qor dhinaca" Mararka qaarkood kharashka, sababtoo ah safari mobile loogu talagalay inay xadidan tahay in la nuqulo iyo dhajiyo code, gaar ahaan marka ay isku dhafan tahay Flash deployment.
Waxaa jira ugu yaraan labo siyaabood:
Midka koowaad wuxuu dooranayaa qoraalka aad rabto in aad isticmaasho sida link oo ku jira qaabka "khadadka dhinaca", ka dibna goobta ayaa u furan browser-ka kaas oo ku jira xiriirka. Marka sawirka ama goobta la helo, gal fartaada kuna jiido qoraalka la soo xulay.
Waxay qaadataa waxoogaa ah ficil, laakiin wakhti ka dib ayuu shaqeynayaa, waxaana qabaa inay ka fiican tahay isticmaalka <href> tag. Marka isku xirka la sameeyo, adiga oo gujinaya waxaad beddeli kartaa shuruudaha xiriirka, sida daaqad cusub, si aad u bedesho domainka gudaha adoo ka saara waddada xididka ama si aad uhesho xiriirinta.
Habka kale waa, had iyo jeer hannaan taajir ah, guji qoraalka hodanka ah oo dooro xulashada "link" oo qor ama nuqul cinwaanka bogga.
Tani waxay tahay in badi tifaftirayaasha Ipad ay hoos u dhaceen. Haddii ay faa'iido u leedahay blogyada, waa in qaabka loo kobciyay aad codsan kartid qaabka, sida hoostaada, geesiga ama caleenta, inkastoo waxaad sidoo kale taaban kartaa tags ee qaabka html.
Hal dhibic ayaa igu adkaatay in aan doorto qoraalka, laakiin ugu dambeyntii waxaan ku arkey wax la taaban karo adigoo laba jeer ku dhejinaya qoraalka, ka dibna jiidaya dhamaadka xulashada adigoo fududeynaya halka ay xiiseyneyso.
By habka, waxaan ku tusi doonaa sawirka ugu wanaagsan ee safarka, kaliya ka dib maalin ka mid ah kalluumeysiga. Tani waa La Puntilla, oo ah webiga Lempa ee El Salvador. Kalluumeysiga, hal kalluun, hal mar iyo labo caday. Nasiib daro inaad weydiisato in lagu kariyo makhaayadda laakiin fiicantahay.
Tani waa wax aad u macquul ah, sida ugu wanaagsan ee aan u arkay, sababtoo ah waxay fududeyneysaa ikhtiyaarka ah in lagu daro summadaha ama qaybaha leh waxqabadka weyn. Waxay xitaa u ogolaaneysaa in lagu daro kuwa cusub ee liiska hore.
Waxay leedahay bug cufan, taas oo lagu dhejiyey version download hadda, taas oo sare u qaaday warqadda ugu horeysa ee qoraal kasta ee cinwaanka boostada.
Si aad u soo daabacdo maqaal diyaar ah, waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka lagu qeexay barta hoose ee loo yaqaan "info post" ama sameyso waxqabadka weyn adigoo jiidaya saddex farood. Weyn, dabcan, kor u qaado badhanka si aad u xaqiijiso haddii ay run tahay ama qalad sahlan oo muujinaya.
Aan ku qanacsaneyn labo dollar. Inkasta oo aynu dhamaanteen rajeyneyno inay jiraan sifooyin badan, badanaa si ay u awoodaan inay ku dhajiyaan sawirada lagu kaydiyo gudaha ama la qaato Ipad2.
Horumarinta wakhti hore ayaa la hirgeliyay ... dad badan
-Waxay horay u taageertaa TypPad, Noockaha Movable, Joomla iyo Drupal
-Interface luuqado badan, oo ay ku jiraan Isbaanish
-In kale habka lagu daro sifooyinka WYSIWYG
Post Previous«Previous Laga soo bilaabo magaalooyinka 3D iyo Isbeddellada GIS 2011
Post Next Egeomates: 30 sano AutoCAD iyo MicrostationNext »
2 Jawaab "Blogsy, Blog for blogs"
xannaanooyinka isagu wuxuu leeyahay:
Ma ogi waxa taariikhda uu yahay blogkaaga, laakiin waxan ka qaban karnaa sawirrada laga soo gali karo telefoonka nooca ipad, iyo sidoo kale fiidiyoowga fiidiyooga laga soo qaado channelkayaga waa AMAZING APP, waan ku faraxsanahay, taageerada farsamada waa mid cajiib ah ... sababta waxay ku soo baxdaa qalad ah ipad diraya farriin iyaga u leh dhibaatada, ka dibna soo noqosho boostada ma soo diraan Qodobka DULULAANKA ah si loo geliyo WP..in config.php aad u buooooooooooo
Lance Barton (Blogsy) isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan ahay Lance, mid ka mid ah guysada ka dambeeya Blogsy.
Waad ku mahadsantahay qorista ku saabsan Blogsy. Waxaan sii wadi doonaa inaan sii wanaajinno bangiyada, sidaa daraadeed waxaan rajeynayaa inay hal maalin ku qancin doonto 99.9% bloggers halkaa.
Haddii aad rabto inaad u codeyso waxa aad jeclaan lahayd in aad aragto ku darsato bangiyada iyo ka dib markii aan ku dhigno in aad sameysid waxaad halkan u tegi kartaa - http://www.blogsyapp.com/about
Dad badan oo isticmaala ayaa noo sheegay in sida muuqaalkeena ah sida fiidiyooga ay uga caawisay inay ka helaan bangiyada. Fiidiyeyaasha waxaa laga heli karaa halkan - http://www.blogsyapp.com/how-to